တရား ဥပဒေ၏ အထက်တွင် မည်သူမျှမရှိစေရ | MoeMaKa Burmese News & Media
AZG ရဲ့ သရုပ်သကန်အမှန်ကို ဆန်းစစ် အံထုတ်ခြင်း
ကိုမိုက်ခဲစိန် - သမိုင်းအသစ် ဖတ်စာအသစ်အတွက် ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းများ - ၃
ငြိမ်းချမ်းအေး - တပ်မတော်နေ့ အမှန်ဖြစ်ရေး အရေးကြီးသည်
သက်ခိုင် - ထောက်လှမ်းရေးချင်း ရန်တိုက်ပေးတဲ့အောင်ဖေနဲ့ မပျော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ရေးည
နေ၀န်းနီ (မန္တလေး) - မန္တ​လေးမြို့က သစ်​ပင်​ဒါယကာကြီး ဦး​ငွေ
ကျော်ဟုန်း - ဖမ်းဆီးခံရဆဲ ဗကသ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ၊ ဝန်းရံပြည်သူတို့ရဲ့ တော်လှန်ကဗျာများ
စိုးလွင် ● ကျနော်နဲ့ ၀မ်ခ (ဟောင်း) တိုက်ပွဲ
ဘာတေးလစ်တနာ - ဘေဂျင်းရဲ့ ပေါ်လစီ မျက်နှာ ၃ ဘက်
အုန်းနိုင် - (၅/၉၀) ဂယက်နဲ့  အဖွဲ့ ချုပ် အအက်
ခင်လွန်း - ကဗျာဆရာကြီး (ဦး) တင်မိုး ကွယ်လွန်ခြင်း (၉) နှစ်ပြည့်အမှတ်တရ
ဓူဝံကြယ် (ပြည်တွင်းမှ တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦး)
ဒီဇင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၂
ယခင် နအဖမှ ဗိုလ်သူရရွှေမန်း ယနေ့ လွှတ်တော် ဥကဌ ၏ နားထောင်၍ကောင်းသော မိန့်မြွက်ချက်တစ်ခုပါ။ မည်သူမျှ ဆိုသည်က အဘယ်သူတို့ကို ရည်ညွန်းပါသနည်း။ ပိုမို၍ ရှင်းလင်းစေရန် မိန့်ခွန်းရှင် ဗိုလ်သူရရွှေမန်း၏ သား(အငယ်) စစ်တက္ကသိုလ်၊ ဗိုလ်သင်တန်း အပါတ်စဉ် (၄၁) ဆင်း၊ ဗိုလ်တိုးနိုင်မန်း၏ လုပ်ရပ်ကိုကြည့်ကြပါ။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် DSA ကျောင်းဆင်း ဗိုလ်တိုးနိုင်မန်းသည် ၎င်းနှင့် အပါတ်စဉ်တူ ဗိုလ်အောင်စောလှိုင်နှင့် စစ်တက္ကသိုလ်၌ အလွန်ခင်မင်ခဲ့ကြသော သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။ မကွေးတိုင်း၊ ဆီမီးခုံ (ဇာတိ) ဗိုလ်အောင်စောလှိုင်သည် ဗိုလ်တိုးနိုင်မန်းနှင့်အတူ ရန်ကုန်မြို့တွင် ၂၀၀၁ ခုနှစ်များအတွင်း အထူး အခွင့်အရေး ရရှိပြီး အလုပ်အကိုင် (ဋ္ဌာနလက်ကိုင်) မယ်မယ်ရရ မရှိသေးပဲ ပျော်ပါးနေရင်း တစ်ရက်တွင် ဗိုလ်အောင်စောလှိုင်သည် ဘုရင့်နောင်ဈေး၊ ခရေပွဲရုံလမ်းနေ သူ၏ တနယ်တည်းနေ ချစ်သူ (ဒုတိယ-နှစ်၊ ဥပဒေ ကျောင်းသူ) ထံသို့ ဗိုလ်တိုးနိုင်မန်းကို အဖော်အဖြစ် ခေါ်ဆောင်သွားရင်း မိတ်ဆက်ပေးမိခဲ့သည်။
ဤသို့ မိတ်ဆက်ပေးပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဗိုလ်တိုးနိုင်မန်းသည် သူငယ်ချင်းချစ်သူအား သဘောကျပြီး စည်းမထားနိုင်ပဲ နောက်ပိုးရာမှ မိန်းကလေးက အလိုမတူသဖြင့် ဗိုလ်အောင်စောလှိုင် ပြန်သိပြီး အချေအစောင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ တိုးတိုးမှ ကျယ်ကျယ် ဖြစ်လာရာ အခြားအရာရှိ သူငယ်ချင်းများမှ ရန်ကုန်မြို့၊ မင်းဓမ္မလမ်းရှိ ကံ့ကော်ရိပ် ဘီယာဆိုင်သို့ခေါ်ပြီး သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးကို ညှိနှိုင်းပေး၍ ခေတ္တခဏ ပြေငြိမ်းသွားခဲ့ပါသည်။ ဗိုလ်တိုးနိုင်မန်းမှ ငမန်းဆိုတာ ဘာကောင်လဲ မင်းတို့ သိပါတယ်။ ငမန်း လိုချင်ရင် မရတာ မရှိဘူး။ ငမန်း အဖေ ဘာလဲဆိုတာ မင်းတို့ သိပါတယ်ဟု ခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
နောက်တစ်လခန့်ကြာသော် DSA အပတ်စဉ် (၄၁)၊ တပ်စုမှူး သင်တန်း တက်ရောက်ရသည့် ဗထူးတပ်နယ် ရပ်စောက်မြို့ တပ်မတော် တိုက်ခိုက်ရေးကျောင်း သင်တန်းတွင် ဗိုလ်တိုးနိုင်မန်းနှင့် နောက်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဗိုလ်သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦးရဲ့ သားတို့မှ အကွက်ကျစီစဉ်၍ ဗိုလ်စောလှိုင်အား အသေသတ်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပါသည်။ ဗိုလ်တိုးနိုင်မန်းအနားမှ ဖော်လန်ဖား အရာရှိတစ်ချို့က သူရရွှေမန်း အာဏာနှင့် မသေမချင်း ရှေ့ တန်းစစ်မြေပြင်သို့ စေလွှတ်ရန် အကြံပေးသော်လည်း “မ” စိတ်မွန်၍ ရမ္မက်ထန်နေသော ဗိုလ်တိုးနိုင်မန်းမှ သူ့ကောင်မကို ငါပြောထားတယ် “နင့်အကောင်ကို ငါ ကိုယ်တိုင် သတ်ပြမယ်၊ နင့်အကောင်ဟာ ဘယ်တော့မှ ငါ့ရဲ့ပြိုင်ဘက် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ နောင်တရစေရမယ်” ဟု ကြိမ်းဝါး ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ဗိုလ်တိုးနိုင်မန်း၏ ဒေါသ (ဖခင်အရှိန်အ၀ါ) ကို ကြောက်၍ ဗိုလ်အောင်စော လှိုင်မှလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး လွတ်အောင် ရှောင်နေခဲ့ပါသည်။
တပ်စုမှုး သင်တန်း ရောက်စဉ် သင်တန်းသား မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်မှ ကိုယ်တိုင် ကားမောင်းနှင်ခွင့် မရှိသော်လည်း အဖေ့အရှိန်အ၀ါကို မှီကာ ဗိုလ်တိုးနိုင်မန်းနှင့် ဗိုလ်သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦး၏သား တို့သည် ISUZU “Double-cub” တစ်ယောက်တစ်စီးနှင့် ညမထွက်ရသော သင်တန်းသားများ၏ ရပ်စောက်မြို့ပေါ်ရှိ အရက်ဆိုင်တကာတွင် သင်တန်းသား ဖော်လန်ဖား အရာရှိများနှင့် တရုန်းရုန်း ပျော်ပါးနေကြ သည်မှာ ရပ်စောက်မြို့ပေါ်တွင် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ ကျင်းပနေသကဲ့သို့ ပင် ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ရက်တွင် ဖော်လံဖား အရာရှိများ အကူအညီဖြင့် ဗိုလ်အောင်စောလှိုင်အား တိုးနိုင်မန်းမှ အရက်တိုက်မည်ဟု အတင်း အပြင်ကို ခေါ်ထုတ်ကာ အရက်အနည်းငယ် သောက်ပြီးချိန်တွင် ဗိုလ်တိုးနိုင်မန်းနှင့် သူငယ်ချင်းအရာရှိတို့သည် ကားပြိုင်မောင်းရန် ယှဉ်ပြိုင် ပြော ဆိုကြသည်။ တိုင်ပင်ထားသည့်အလား ဗိုလ်တိုးနိုင်မန်း သူငယ်ချင်း ဗိုလ်တင်အောင်မြင့်ဦးသားက မိမိတစ်ဦးတည်း ကားမောင်း၍ ဗိုလ်တိုး နိုင်မန်းက အဖော်အဖြစ် ဗိုလ်အောင်စောလှိုင်အား သူ့ကားပေါ် လိုက်ခဲ့ပါရန် အတင်းခေါ်ရာ မရိုးသားသော အခြေအနေကို ရိပ်မိသဖြင့် ဗိုလ်အောင်စောလှိုင်သည် ငြင်းဆိုခဲ့သော်လည်းမရသဖြင့် အခြားဗိုလ်တစ်ဦးကိုပါ ထပ်မံခေါ်ယူရန် ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် တိုးနိုင် မန်းသည် သူ၏ “Double cup” နောက်ခန်းတွင် ဗိုလ်အောင်စောလှိုင်နှင့် အခြားသောအရာရှိ အဖော်တစ်ဦးအား ထိုင်စေ၍ ရှေ့ခန်းတွင် တစ်ဦးတည်းထိုင်ကာ ကားမောင်းပြိုင်ခဲ့ကြသည်။
ရပ်စောက်မြို့ ဈေးအနီးရှိ အရက်ဆိုင်မှ စတင်၍ တပ်မတော် (ကြည်း) တိုက်ခိုက်ရေးကျောင်း ထိပ်ကို ပန်းတိုင် သတ်မှတ်ကာ ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ကြပါ သည်။ ရပ်စောက်မြို့ စစ်ဆေးရုံအကျော် လူရှင်းသောနေရာသို့ရောက်လျှင် ဗိုလ်တိုးနိုင်မန်းသည် ကားရပ်၍ အောင်စောလှိုင်အား မိမိကိုယ်ပိုင် သေနတ် (တပ်မတော်မှ ထုတ်ပေးထားသော သေနတ်မဟုတ်) နှင့်ရင်ဘတ်ကို တစ်ချက်တည်း အသေပစ်သတ်ခဲ့သည်။ အဖော်ပါလာသော အခြားအရာရှိတစ်ဦးကိုလည်း မျက်မြင်ဖြစ်နေသဖြင့် အကယ်၍ နှုတ်မလုံဘဲ ပြဿနာပေါ်ပါက မိမိတို့နှစ်ဦး ဒုက္ခဖြစ် နိုင်သည်ဟု ဗိုလ်တိုးနိုင်မန်းအား ဗိုလ်သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦး၏ သားမှ ပြောဆိုရာ ဗိုလ်တိုးနိုင်မန်းမှ အဖေါ်လိုက်ခဲ့သူ အခြားအရာရှိကိုပါ ထပ်မံပစ်သတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လမ်းဘေး (၁၂) ပေခန့် နက်သော ချောက်ကလေးထဲတွင် ကားနှင့်အတူ အက်ဆီးဒင့်ဖြစ်သလို ထားခဲ့ပါသည်။ အခြေအနေမှန်ကို စစ်ဆေးသော အရာရှိဆိုသူများမှလည်း ကားအက်ဆီးဒင့်ကြောင့်သေရတာပါဟု ဆင်သေကို ဆိတ်သား ရေဖုံးသော စာထုတ်ပေးကြရပါသည်။ အရာရှိနှစ်ဦး၏ ဆွေမျိုးမိဘများမှာ မကျေနပ်သော်လည်း မည်သို့မျှမပြောရဲ ကြပေ။ ဤသတင်းအား မည်သူမှ မပြောဆိုရန် ပိတ်ပင်၍ ခံဝန်ထိုးကာ ပြန်လွှတ်ခဲ့ပါသည်။
လူသတ်သမား ဗိုလ်တိုးနိုင်မန်းမှာ ဖခင်အရှိန်အ၀ါနှင့် မည်သို့မျှ ခေါ်ယူ စစ်ဆေးခြင်းပင် မခံခဲ့ရပေ။ ဤအကြောင်းအား မိမိ မိသားစုအား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူ ဗိုလ်ထက်အောင် (DSA – ၄၀) မှာ ထိုစဉ်က တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေး အကူ (၁) မှ ခေါ်ယူ၍ ပြင်းထန်စွာ သတိပေးခြင်း ခံခဲ့ရပြီး လုပ်သက် (၂) နှစ်လျော့ ပြစ်ဒါဏ်ခံခဲ့ရပါသည်။ အခြားသိရှိသော အရာရှိများမှာလည်း ထိပ်တန်းလျှိူ့ဝှက် အနေနှင့် နှုတ်ပိတ်နေခဲ့ရပါသည်။ ဗိုလ်သူရရွှေမန်းသည် မိမိသား “နှာဘူးလေး” အား နောက်ထပ် အမှားမလုပ်မိစေရန် ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေအား မင်္ဂလာဒုံ ဥယျာဉ်မြို့တော်သစ် တိုးချဲ့ လုပ်ကိုင်ခွင့်စီမံကိန်းကို ထပ်မံပေး၍ သမီးဖြစ်သူ ဇေဇေလတ်နှင့် ကြောင်းလမ်းခဲ့ပါသည်။ မျက်လုံးပြူး (အမြင်ကျယ်) ၍ အရှည်ကိုမြင်သော ဦးခင်ရွှေမှ သဘောတူလက်ခံကာ Sedona Hotel တွင် ခမ်းခမ်းနားနား လက်ထပ်ပေးခဲ့ပြီး ယခုအခါ ရန်ကုန်မြို့ တွင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်လျက် ရှိနေပါသည်။
ထို့ကြောင့် “ဥပဒေ၏ အထက်တွင် မည်သူမျှ မရှိစေရ” ဟုဆိုခဲ့သော ဗိုလ်သူရရွှေမန်းသည် “ဥပဒေ” ၏ မည်သည့်နေရာမှ မိန့် ခွန်းချွေ ခဲ့ပါသနည်း။ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ကြီး ပေါ်ပေါက်လာရေးနှင့် (နအဖ) အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးရေးအား ရည်သန်၍ အရာရှိ တစ်ဦးမှ တင်ပြသည်။
2 Responses to တရား ဥပဒေ၏ အထက်တွင် မည်သူမျှမရှိစေရ
minko on December 25, 2012 at 2:41 pm
ဘာမှ မထူးပါဘူး-စစ်တပ်က အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ကာလ တလျှောက်လုံး ဖြစ်ချင်သိလို ဖြစ်နေတာဘဲ- အဲဒီ အကျင့်တွေက အခုထိ မပျောက်တော့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဥက္ကဌ နာမည်ပျက်ယုံဘဲရှိမယ်။ တရားဥပဒေကတော့ စိုးမိုးမည့် အရိပ်အရောင် ဘာတခုမှ မတွေ့ မမြင်ရသေးပါဘူး။
true talker on December 25, 2012 at 5:06 pm
Speak out, find out,this kind of criminal which were hidden and covered,because,the murderers are extreme power Generals’ sons. There is no law, in Burma, for the Power Crazy ‘s Junta Families.Burma,cannot become Democracy country,with these selfish Generals.They must remove from their ranks,immediately,and take action for what they have committed. GeneralThan Shwe, had given order to killed even babies ,at his “Ah seit thar “,case in Mergui(Myeit) island event. So, please speak out, find out,claims, for what these power crazy families had committed in the past.